Jery taratra… herinandro : fifandroritana… tsy ahitana ny marina | NewsMada
Lasa fifamaliana ny “Raharaha Anjozorobe“: ady amin’ny fifandraisana, amin’ny haino aman-jery… Nilaza ny filohan’ny Repoblika ny amin’ny tokony hitondra porofo, raha tany Anjozorobe ny zanany. Nanamafy ny zanak’Androy fa manana porofo ny amin’izany, ary tsy hamela ny raharaha ho vitavita ho azy.
Andrasana ny vokatry ny fanadihadiana lalina, fa tsy ahitana ny marina ny fifamaliana lava. Nilaza ny Praiminisitra teo aloha, Beriziky Jean-Omer, fa tokony hisy ny fanadihadiana lalina momba ireo bolabolana andramena tratra tany Singapour. Tsy azo eritreretina ho ara-dalàna velively ny fanondranana andramena.
Ifandroritana ny amin’ny tsy fisian’ny mpanohitra eny anivon’ny Antenimierampirenena sy ny Antenimierandoholona. Misy ireo mitonon-tena ho mpanohitra, mampiaka-peo. Nefa tsy mahataitra ny sasany: kely feo, vitsy anisa? Ao ny milaza fa tsy avoakan’ny mpitondra ny didy fampiharana momba ny fanoherana.
Tsy mba toy ny tamin’ny Andro iraisam-pirenena ho an’ny vehivavy hoe nanaovana dingana
ho fampimirana lenta ny lahy sy ny vavy. Samy nanao hetsika ny isan’ambaratonga sy ny isan-tsehatra. Saika nampiady hevitra ny andron’ny 8 marsa: tsy fetin’ny vehivavy, fa ady ho amin’ny fampitovian-jo ny lahy sy ny vavy.
Mahazo vahana hatrany ny tsy fandriampahalemana: asan-jiolahy amin’ny fanafihana mitam-basy, ny vono olona amin’ny fomba mahatsiravina… Hatsangana ny hery manokana hisahana ny asan-dahalo any atsimo, araka ny tapaky ny filankevitry ny minisitra. Hapetraka any Betroka izany…
Nilaza ny minisitry ny Fitsarana fa natsangana any Maroantsetra ny komitin’ny olon-kendry mba tsy hiverenan’ny fitsaram-bahoaka, fandoroana biraon’ny fitsarana… Tsy tokony hoentim-pahazarana amin’ny asany ny mpitsara, fa mila manao fikarohana araka ny zava-misy amin’ny famoahana didy fakan-tahaka.
Mbola ifandroritana ny ankamaroan’ny raharaha etsy sy eroa, tsy ahitana ny marina.